लालगढलाई समृद्ध बनाउने सुनौलो नमुना युवा क्लबको लक्ष्य – Mero Pradesh TV
सुनौलो नमुना युवा क्लब । यो नाम सुन्दैमा लाग्छ क्लबको लक्ष्य समाजमा सुनौला अवसर सृजना गर्नु र नमुना काम गरेर समाजलाई समृद्ध बनाउनु हो । र हो पनि यो क्लब स्थापना भएको थोरै समयमा समाजमा रहेका विकृति, सचेतना र विकास निर्माणका काम गरे समाजको ध्यान आफुतिर तान्न सफल भएको छ ।
धनुषा जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित मिथिला नगरपालिकाको वडा नं. १० लालगढस्थित सुनौलो टोलका सत्र जना युवा युवती मिलेर ‘सुनौलो नमुना युवा क्लब लालगढ’ गठन तथा दर्ता गरेको आठ महिनाको सानो अवघिमा थुप्रै समाज समृद्धिका कार्य गरेपछि सबैतिरबाट प्रशंसनीय बनेका छन क्लबका सदस्यहरु ।
“सुनौलो नमुना समाज हाम्रो पचिान, समृद्ध बस्ती–बस्ती निर्माण हाम्रो अभियान” नारा दिएर २०७६ असोज मसान्तमा क्लबको आधिकारीक रुपमा दर्ता गराएर समाज समृद्धको काममा जुटेका छन् उनीहरु । महिला पुरुष गरी १७ जना सदस्य रहेको यस क्लबको अध्यक्षमा मनकुमार कुरुम्वाङ्ग (लिम्बु) छन् ।
क्लब दर्ता गरे लगतै उनीहरुले भोज भतेर गर्न भाडावर्तन अन्यत्र खोज्न जानु नपरोस भनेर २ लाखको लागतमा भाडा वर्तन किने । त्यस लगतै सडक दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा लालगढस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ्गका सके । यस्तै होलीको अवसरमा गाउँलेलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न ‘होली साँस्कृति कार्यक्रमको आयोजना, किसानलाई करेसाबाली लगाउन निःशुल्क विउ वितरण, महिला हिंसा र चेलिबेटी बेचबिखन बिरुद्धको सचेतना अभियान, सुनौलो बस्तीमा वन कार्यालयको सहयोगमा १ हजार १ सय वृक्षारोपण र हाल विश्वभरी फैलिरहेको कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमणलाई रोकथाम, न्यूनिकरण र यसबाट बच्ने उपायका बारेमा सचेतना कार्यक्रम गरेका छन् ।
यो पनि पढौं..
३ लाख २० हजार खर्चमा १२ किलो मीटर सडक निर्माण
१२ किलो मिटरको सडक बनाउन कति बजेट चाहिएला ? १ करोड , १ करोड ५० लाख वा २ करोड ? तर धनुषाको मिथिला नगरपालिका १० नम्वर वडामा पर्ने लालगढका युवाले करिव पौने तीन लाखको लगानीमा करिव १२ किलोमिटर सडक बनाएका छन् । त्यो पनि ग्रावेल सहित । सडकको चौडाई छ , ५० देखी १६ फिट सम्म ।
ललगढका युवाहरुको एक समूहले लालगढका प्रत्येक घर सम्म सडक पुर्याएका छन् । उनिहरुको अभियान छ , पार्टी र जाती होईन , हामी विकास प्रेमी हौँ । उनिहरुको यो अभियानलाई भरपुर सहयोग गरेका छन् मिथिला नगरपालिकाका मेयर हरिनारायण महतोले । महतो मेयरले उनिहरुको यो अभियानले भित्रैबाट आफूलाई छोएकोले नगरपालिकाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण सहयोग गरेको बताए । मेयर महतोले भने , लालगढका युवाहरुको काम देशको लागि नमुना हुने भएकाले मैले सहयोग गरेको हुँ , देश भरी यस्ता युवा सक्रिय हुने हो भने नेपालले विकासमा कायापलट गर्छ ।
स्थानि राजनीतिकर्मी सरोज कार्की भन्छन् , सामान्यातया नेपालमा सानो कामलाई पनि २० लाख लिने चलन थियो , तर यो समूहले ४ लाखमै यस्तो काम गरेर देखायो , जुन उदाहारणीय छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।
तर लालगढको तल्लो खयरटोकी बाट सुरु गरिएको सडक धनेश्वर , प्रगती , ग्रिन भिलेज , सुर्योदय , लालगढ लगायतको टोलका घरघरमा सडक पुगेको छ । यो सडक बनाउन स्थानियहरुले कम बाधा बिध्न खेप्नु परेन । नजिकै रहेको रातु खोलाबाट गिट् िग्रावेल तस्करी भईरहँदा उनिहरुलाई सडकमा राख्ने ग्राभेल उपलब्ध गराईएन । सडक बनाउन प्रत्यक्ष रुपमा लागि परेका मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर १० वाटो मर्मत सम्भार उपोभोक्ता अनुगमन समितीका सदस्य विजय साह भन्छन् , यो बाटो बनाउन धेरैले अवरोध गरे तर हामीले हार खाएनौँ , निरन्तर गरिरह्यौँ , यो कामलाई वडाअध्यक्ष सविन विक्रम थापाको पनि ठुलो सहयोग छ ।
यो बाटो बनाउन चानचुने कुरा थिएन । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २० लाख रुपैयाँ निकासा गरेर पनि यो बाटो पूर्णरुपले बनाउन सकिएको थिएन । यो चुनौतिलाई आफ्नो जिम्मेवार सम्झिए , २७ बर्षिय युवा मनकुमार लिम्बुले । जो पुर्व तेह्रथुमबाट ८ बर्ष पहिला लालगढ बसाँई सरेका थिए । उनि यो समितीको अहिले सचिव समेत हुन् । उनि साहित्यअनुरागी हुन् ।
निजि विद्यालयहरुमा अध्यापन गराउने उनलाई समाज विकासको कुराले सानै देखी भित्रैबाट छुन्थ्यो । कम्युनिष्ट पृष्ठभुमीका उनले लालगढको विकासको पनि खाका बनाएका थिए , तर गोजीमा । उनको यो विकास प्रेमी भावनालाई कदर गरे वडाअध्यक्ष सविन विक्रम थापाले ।
नगरपालिकाले एउटा जेसिवी र ५ ओटा ट्याक्टर उपलब्ध गराउने भयो , तर तेल समितीले हाल्नु पर्ने शर्तमा । समितीलाई यो बाटो बनाउन नगरपालिकाले पहिला २ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो , तर काम अघि बढ्दै जाँदा २ लाख रुपैयाँले नपुग्ने भए पछि नगरपालिकाले पुनः २ लाख थपिदिने त भनेको छ तर सम्झौता भने गरेको छैन । स्थानिय नरवाहादुर कार्कीले भने , यति सानो रकममा यतिका बाटो बन्ला भनेर हामीले सोचेका थिएनौँ , स्थानिय सामुदायिक बनले अवरोध गरे पनि बाटो बन्यो , खुशी लागेको छ ।
अनुगमन समिती सदस्य सानु झा भन्छिन् , मधेसमा बजेटमात्रै पचाउने कुराहरु ीमडियामा आउँछन् , तर हामीले त ४ लाख पनि खर्च नगरी १२ किलो मिटर सडक बनायौँ ।समितीका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद पौडेल भन्छन् , विरोधीहरुले वाधा अवरोध धेरै गरे पनि हामीले सघंर्ष गरेरै काम सकेउँ , खुशी लागेको छ । अनुगमन समितीका सयोंजक शुरेस लामा भन्छन् , पैसा खान पल्किएका विरोधीहरुले यो काम हुन नदिन धेरै भुमिका खेले तर हामी टसमस नभई काममा जुट्यौँ । लालगढको १२ किलो मिटर सडक जम्मा ३ लाख २० हजारमा बन्यो भन्दा मधेशका धेरै जनप्रतिनीधिले जिब्रो टोके ।
ललगढमै रहेको बौवा होटलका सञ्चालक वौवा श्रेष्ठले भने , देशकै लागि नमुना काम गरेका छन् लालगढका युवाले , ३ लाख चानचुनमा १२ किलो मिटर सडक बनाउनु चानचुने कुरा होईन ।
आजदेखि माैसममा केही सुधार
रौतहटमा ट्र्याक्टर दुर्घटना , एक वृद्धाको मृत्यु , ७ जना घाइते
लालगढ कुष्ठरोग सेवा केन्द्रमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था